Kwenye indawo phakathi kwe-SPAM kunye ne-Creepy Lies Ukungafihlisi | Martech Zone
Kwenye indawo phakathi kwe-SPAM kunye ne-Creepy Lies Transpareence
NgoMvulo, Matshi 26, 2018 NgoLwesibini, Matshi 27, 2018 Douglas Karr
Iiveki zamva nje bezindivule amehlo ngokubhekisele kwizikrelemnqa zedatha ezichazwe kwiindaba eziqhelekileyo. Ngokunyanisekileyo ndothukile ngoontanga bam abaninzi kolu shishino kunye nokuphendula kwabo emadolweni kunye nokuphendula kwindlela idatha ye-Facebook eyavunwa ngayo kwaye isetyenziselwa iinjongo zopolitiko ngexesha lomkhankaso wamva nje.
Imbali ethile kwiPhulo likaMongameli kunye neDatha:
2008 -Ndinencoko emangazayo kunye nenjineli yedatha evela kumkhankaso wokuqala kaMongameli u-Obama owabelana ngendlela abavuna kwaye bathenge ngayo idatha. Iiprayimari zabo zazinzima, kwaye iDemocratic Party ayizukukhupha uluhlu lwabaxhasi kunye nabaxhasi (de kube emva kokuba kuphumelele iiprayimari). Isiphumo yayikukuba eli phulo laqhekeka, laququzelelwa, laza layakha enye yezona ndawo zigcina idatha ngokumangalisayo kwimbali. Kwakukuhle kakhulu ukuba ukujolisa kuye kwehla kwinqanaba lobumelwane. Ukusetyenziswa kwedatha, kubandakanya Facebook, kwakungekho nto imfutshane ngokuqaqamba- kwaye yayisisitshixo sokuphumelela iprayimari.
2012 -Facebook usebenze ngokuthe ngqo ngephulo lika-Mongameli u-Obama Kwaye, kubonakala ngathi idatha yaxutyushwa ngaphaya kokulindelekileyo nakubani na ukukhupha ivoti kunye nokunceda ekuphumeleleni uMongameli kunyulo lwesibini.
2018 Ngokusebenzisa impempe, iCambridge Analytica ikhutshiwe njengenkampani baxhaphaza amandla edatha kaFacebook ukubopha imiqulu engakholelekiyo yedatha.
Ngoku, inyani iyaxelwa, amaphulo amabini okuqala anokulungelelaniswa neFacebook (bekukho nokungqubana phakathi kwephulo kunye namalungu ebhodi ye-Facebook). Andililo igqwetha, kodwa kuyathandabuza ukuba abasebenzisi be-Facebook bavumile okanye abanalo olu hlobo lokusetyenziswa kwedatha ngokwemiqathango ye-Facebook. Kwiphulo likaMongameli uTrump, kucacile ukuba umsantsa waxhatshazwa, kodwa kusekho umbuzo wokuba akukho mthetho waphulwayo na.
Isitshixo sokunye koku kukuba ngelixa abasebenzisi banokuthatha inxaxheba kwiiapps kwaye banikezela imvume yokufikelela kwidatha yabo, idatha yabahlobo babo kwi-Intanethi nayo yavunwa. Kwezopolitiko, ayiqhelekanga into yokuba abantu abanezimvo ezifanayo kwezopolitiko bathontelane ndawonye kwi-intanethi… ke le datha yayiyeyam yegolide.
Le ayisiyo post yezopolitiko-kude kuyo. Ipolitiki yenye yezo mveliso apho idatha ibaluleke kakhulu kumaphulo. Zimbini iinjongo ekujoliswe kuzo kolu hlobo lomkhankaso:
Abavoti abangakhathaliyo Ukuqinisa abahlobo kunye nabahlobo ukukhuthaza abavoti abangakhathaliyo ukuba babonakale kwaye bavote sisicwangciso esiliqili kula maphulo.
Abavoti abangagqitywanga -Abavoti abangagqitywanga baxhomekeke kwelinye icala okanye kwelinye, ke ukufumana imiyalezo elungileyo phambi kwabo ngexesha elifanelekileyo kubalulekile.
Into enomdla kukuba, zombini ezi seti zabavoti yipesenti encinci kakhulu. Uninzi lwethu luyazi ukuba yeyiphi indlela esiza kuvota kuyo kude kufike unyulo. Isitshixo kula maphulo kukuchonga ugqatso lwasekhaya apho kukho ithuba lokuphumelela, kwaye ulandele la macandelo mabini kunzima kangangoko kunokwenzeka kwimeko apho unokukhuthaza kwaye uphembelele ivoti yabo. Amaqela esizwe awazibonakalisi nakwiindawo apho aqinisekile khona ukuba aza kuphumelela okanye aphulukane… zizinto ezijolise kubo.
Ngolu lonyulo lwamva nje lubangele iyantlukwano, ayothusi into yokuba ngoku iindlela zimbiwe kwaye zihlolisiswe ngolu hlobo. Kodwa ngokwenene ndithandabuza ingqumbo yabo bahlasela isicwangciso kunye ne-mea culpas yabo babanjiweyo. Wonke umntu onolwazi kwezopolitiko uyayiqonda indlela ebaluleke ngayo idatha. Wonke umntu obandakanyekayo wayeyazi into abayenzayo.
Ixesha elizayo leDatha yokuThengisa kunye neMfihlo
Abathengi (kwaye, kule meko abavoti) bafuna iinkampani (okanye ezopolitiko) ukuba baziqonde buqu. Abantu bayayidelela imiqulu emininzi yespam kunye neentengiso ze-banner. Sizithiyile iintengiso zopolitiko ezingayekiyo ezikhukhula ngokuhlwa kwethu zikhokelela kwiphulo.
Oko abathengi bafuna ngokwenene kukuqondwa kwaye kwaziswe ngokuthe ngqo. Siyayazi ngoku le nto-imikhankaso eyenzelwe wena kunye nemisebenzi ejolise kwiakhawunti. Andithandabuzi ukuba iyasebenza nakwezopolitiko. Ukuba umntu uneenkolelo ezimbalwa ezisekhohlo kwaye badibana nentengiso exhasa abavumelana nayo, baya kuyithanda kwaye babelane ngayo. Kwangokunjalo kuya kubakho umntu othembekileyo.
Nangona kunjalo, ngoku abathengi bayalwa. Bayakucaphukela ukuphathwa gadalala kwabo kuFacebook (kunye namanye amaqonga). Bakudelile ukuqokelelwa kwendlela abaziphatha ngayo kwi-Intanethi. Njengomthengisi, oku kuyingxaki. Siwenza njani umyalezo ube ngumntu kwaye sihambise ngokufanelekileyo ngaphandle kokukwazi? Sifuna idatha yakho, kufuneka siyiqonde indlela oziphethe ngayo, kwaye kufuneka sazi ukuba unethemba na. Ucinga ukuba kuyothusa ... kodwa enye into sisithi sogaxe wonke umntu.
Yiyo eyenzekayo ngokubhekisele kuGoogle (ofihla idatha yabasebenzisi ababhalisiweyo) kwaye inokuba yintoni eyenzekayo ngoFacebook, esele babhengeza ngokungafanelekanga ukuba ukufikelela kwidatha kuya kuthintelwa. Ingxaki iyanda ngaphaya kwezopolitiko, ewe. Yonke imihla ndifumana amakhulu kunxibelelwano ngabantu abathe bathenga idatha yam ngaphandle kwemvume yam - kwaye andinandlela yakukufumana uncedo.
Phakathi kogaxekile kunye noCreepy kukungabonakali
Ngokombono wam othobekileyo, ndiyakholelwa ukuba abasunguli beli lizwe bayazi ukuba idatha izakubaluleka, ngeba bongeze uhlengahlengiso kwiBhili yamaLungelo apho sinedatha yethu kwaye nabani na onqwenela ukuyenza wayefuna imvume echaziweyo kunokuba ukuvuna singazi.
Masijongane nayo, kunyanzelo lweendlela ezimfutshane zokujolisa kunye nokufumana abathengi (kunye nabavoti), siyazi ukuba besiyinto enqabileyo. I-backlash yimpazamo yethu. Kwaye iziphumo zinokuvakala kwiminyaka ezayo.
Andiqinisekanga ukuba liphelile ixesha lokulungisa ingxaki, nangona kunjalo. Isisombululo esinye sasombulula konke oku - Kuhleni. Andikholelwa ukuba abathengi banomsindo wokwenene kuba idatha iyasetyenziswa… Ndicinga ukuba banomsindo kuba bebengazi nokuba kuyavunwa kwaye kusetyenziswe. Akukho mntu ucinga ukuthatha imibuzo yezopolitiko kuFacebook yayikhupha idatha yabo kwiqela lesithathu ukuba ithengwe kwaye ijolise kwiphulo lezopolitiko lesizwe. Ukuba benze njalo, ngekhe bacofe kulungile xa ibabuza ukuba babelane ngedatha yabo.
Kuthekani ukuba zonke iintengiso zibonelela ngengqondo yokuba kutheni sijonge kuyo? Kuthekani ukuba yonke i-imeyile inike ukuqonda ngendlela esiyifumene ngayo? Ukuba sibaxelele abathengi ukuba kutheni sithetha nabo ngomyalezo othile ngexesha elithile, ndinethemba lokuba uninzi lwabathengi luya kuvuleleka kuwo. Kuya kufuna ukuba sifundise amathemba kwaye senze zonke iinkqubo zethu zibe selubala.
Andinathemba lokuba oko kuyakwenzeka, nangona kunjalo. Oko kunokukhokelela kuogaxekile ngakumbi, kuyothusa ngakumbi… de kube kugqityiwe ukulawulwa. Siye sahamba kwezinye zezi zinto ngaphambili Sukuthumela imeyile kwaye Sukufowuna uluhlu.
Kwaye kubalulekile ukuba uqaphele ukuba bekukho ukuxolelwa okukodwa kulawulo lolawulo ... bezopolitiki.
tags: Uhlalutyo lwecambridgeIdatha yabathengizikhuniIinkcukachaIdatha yonyuloUkhethoFacebookobamaUnyulo lwe-obamawabucalaispemuekujoliswe kuyoKuhlenitrumpunyulo lwexilongo
I-Lumen5: Amanqaku okuphindaphinda kwiividiyo zentlalo usebenzisa i-AI
I-Anchor: Isimahla, ilula, iPodcasting enobuhlobo